Akaụntụ PMP - 10 Ihe Mere Iji Nweta PMP Asambodo - ITS Tech School
Ntinye akwukwọ PMP - 10 kpatara iji nweta akwukwo asusu PMP
Ihe 10 mere iji mee ihe ngosi PMP
Olee otú ọzụzụ PMP na-aba uru
Nhọrọ PMP na Ọrụ
Ndi oru PMP kwenyere na ha nwere ogo di elu
PMP Asambodo nwere oke
Usoro akwukwo PMP na eme ka ihe omuma gi di nma.
Ọganihu ka mma
Na-arịgo na ụgwọ ọnwa
Gbasaa ọrụ nlekọta nchịkwa chọrọ PMP Asambodo
Ka mma dị ka onye nlekọta nyocha
Ị ga - abụ onye si n'otu ebe dị n'etiti ndị ọkachamara ọkachamara kachasị mma
Ọrụ nchịkwa Project Management (PMP) bụ ọkwa dị n'etiti ndị na-ahụ maka ọrụ ụlọ ọrụ kacha mkpa. A na-aghọta ndị niile na-agụnye ma gosipụta na ị bụ onye maara ihe, nwee ahụmahụ na onye ruru eru na nchịkwa azụmahịa. Maka ihe mgbaru ọsọ nkpeazu ị ga-etinye n'ọrụ, ịchọrọ ogo afọ anọ (Bachelor degree or global all identical) na ọ dịghị ihe na-erughị afọ atọ nke nchịkwa nlekọta zutere. Ị ga-achọkwa ihe ọ bụla na-erughị awa 4500 nke ịkwọ ụgbọala na ịhazi ihe omume yana oge 35 nke Management Management Education. N'agbanyeghi na ị gaghị enwe akara Bachelọ, ị nwere ike itinye n'ọnọdụ ọ bụla.
Ọ bụrụ na ịnwe nkwenye inyeaka (ụlọ akwụkwọ sekọndrị maọbụ ụwa zuru oke) ị ga-enwerịrị ihe dịka afọ ise nke nchịkwa nchịkwa na oge 7500 nke nhazi na ọrụ ịkwọ ụgbọala na oge 35 nke nchịkwa ntụziaka, ị nwekwara ike ịnye ya.
Nnukwu nke PMP bụ nnukwu ihe. Ọ bụ otu n'ime akwụkwọ edemede 10 kachasị elu na ụwa. A na-achọpụta na ị ga-enyocha akwụkwọ azụmahịa PMP. Ọtụtụ òtù dị iche iche emeela ka ọ dị mkpa maka ndị PMs iji mezuo otu PMP ma ọ bụ akwụkwọ ikikere. Na ohere na ị nweghị asambodo a mgbe ahụ a naghị ele gị anya maka PM (Ọrụ Project) ọrụ. Nke a nwere ike ibelata ọganihu ọrụ gị. Ntugharị ọzọ iji mee PMP bụ ụgwọ. Dị ka akwụkwọ PMI si kwụọ ụgwọ ọrụ itoolu, ndị nwere akwụkwọ ikike PMP na-eweta ụgwọ dị elu (20% elu karịa ma buru ibu) karịa ndị na-enweghị asambodo a.
Inwe asambodo a ga-eme ka o di mfe karia ichota oru dika ihe omume ma obu Manager Project. Ọnụ ọgụgụ nke PMP bụ ihe dị mma. Ọ bụ ihe niile a ma ama ma weere asambodo. Dị ka ọ dị iche iche nyocha, ọ bụ otu n'ime edemede 10 isi na mbara ala.
Ọ bụ ezie na nke a bụ arịrịọ na-egosi na ọ bụ ihe na-ezighị ezi, ịgbakwunye ndị nlekọta na ọzụzụ PMP na-ekwenyekarị na ha ga-enwe ndokwa nke uru ikike iji mee ka e jide n'aka na ị ga-enweta ego.
Nyefee Management Professional Asambodo bụ n'ụwa nakwa. E nwere ọtụtụ ọrụ ndị chọrọ ndị isi nwere ọzụzụ PMP. Otu akụkụ nke ihe atụ bụ ịmepụta inyeaka, ụlọ dị mkpa, ụlọ mmanụ na gas, ụlọ ọrụ, mmepe, njem, na injinịa. Site na ikikere PMP, ị nwere ike iduga mkpọ.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ọrụ dịka onye na-elekọta ma ọ bụ onye nlekọta ihe omume-ma ọ bụ ka na-arụ ọrụ nchịkwa na-arụ ọrụ nke ọma-ọrụ nchịkwa Project Management ọkachamara dị mkpa iji gbakwunye na mmalite gị.
Akwa ọrụ, ọtụtụ òtù na ọrụ nwere ihe nkwado dị mkpa nke PMP certification, ya mere, na ohere na ị bụghị PMP a kwadoro, ị pụghị ịmalite ịmalite, n'agbanyeghị afọ ole ị nwere. Enwere uzo di iche iche nke inwe ọganihu nime mmekorita gi dika o na enyere aka na mmegbu nke ndi ozo.
Dịka ọhụụ PMI Project Management Salary Survey, Ninth Edition-Ndị ọrụ nchịkwa nke Ụlọ Ọrụ (PMP) na US natara 22% karịa ndị ha na-abụghị ndị na-akwụ ụgwọ na 2015.
Ị ghaghị inwe obi abụọ na ị ga-etinye ihe onwunwe n'ime PMP na ohere ị na-atụ anya ka ị rụọ ọrụ n'ọfịs ịchọta ego maka ihe ọ bụla fọdụrụnụ ná ndụ gị. Nke a apụtaghị igosi onwe gị ma mee ka ịkwado ọnọdụ gị n'ogologo oge ọzọ na-enyere gị aka ịmụta ọkwa aapụ dị mkpa na mpaghara a.
Ọ na-enyere gị aka imeziwanye onye nlekọta achụmnta ego na-amị mkpụrụ. N'ime oge, mgbe ị gụsịrị akwụkwọ a, ị na-anakọta ozi gbasara ngwaọrụ na atụmatụ iji mee ka ị na-amịkwu mkpụrụ. Nke a n'ikpeazụ na-eme ka ùgwù gị dị na nzukọ. Ị ga-enwe ohere maka ịrụkọ ọrụ ọnụ na nhazi usoro site na ndị ọkachamara nchịkwa ndị ọzọ na gburugburu ụwa, nke nwere ike ịmepụta nsogbu gị nke mmezu ọkachamara na mma.
Site n'igosi akwụkwọ ikikere PMP, a ga-etinye aha gị n'ime nchịkọta kasịsị elu na nke kachasị elu nke ndị ọkachamara Project Management Experts.
Na ohere na ị na-atụ anya ịmegharị ọrụ, akwụkwọ ikike PMP nwere ike inyere gị aka. Site na ịchọta nzere ntozu ebe ị nwere ike ịchọ ọtụtụ afọ, ị nwere ike ịmalite na nbata na ọkwa dị elu ma kwụọ ụgwọ karịa nke ọzọ ị ga-enwe ike ime. Nkwekọrịta PMP agaghị abụ ihe kachasị mgbalị ị ga-eme n'ọrụ gị ma ọ ga-akpali gị nke ọma.
Ịmụta PMP bụ n'ụzọ doro anya ma nye aka na Ọ BỤ. Ọ na-akụzi usoro ihe okike na-arụ ma na-enye ndị òtù ohere ịnata mmụta site na nlekota ala dị iche iche.
Usoro 3 ka ọkachamara na Project Management Professional Training